यदि तपाईमा यी लक्षण छन् भने तपाईलाई धर्माशास्त्रले देवी मान्नेछ… – Suchana Hub
यदि तपाईमा यी लक्षण छन् भने तपाईलाई धर्माशास्त्रले देवी मान्नेछ…
काठमाण्डौ । नेपली समाजमा नारीलाई देवीको प्रतिक मानिन्छ। नारीलाई दुर्गा अर्थात शक्ति, सरस्वती अर्थात कला, लक्ष्मी अर्थात समृद्धिको रुपमा पूज्ने गरिन्छ । तर नारी भन्नसाथ नारी देहले मात्र पुग्दैन । उसको स्वभाव, प्रवृत्ति, चालचलन, सोंच आदि थुप्रै कुराले एउटा नारीलाई वास्तवमै कोमल, सहृदयी, विवेकशिल बनाउने हो भन्ने मान्यता छ। धर्मशास्त्रले कस्तो नारीलाई देवीको रुपमा व्याख्या गर्छ त? देवीका रुपमा पुजिनको लागि नारी कस्तो हुनुपर्छ ? वा कस्ता नारीले घरमा सुख-समृद्धि भित्र्याउन सक्छ भनेर व्याख्या धर्माशास्त्रमा व्यख्या गरिएको छ।
धर्मशास्त्र अनुसार यी गुण भएका नारीलाई हिन्दू धर्ममा देवीको प्रतिक मानिन्छ : – जसले मीठो बचन बोल्छ । – जसको आवाज मधुर छ र हरेक क्षण जसले मायालु बोली-ब्यवहार दर्शाउँछिन् । – आस्तिक, सेवा भाव राख्ने, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान, कर्तव्य पालना पूर्ण निष्ठाका साथ गर्ने नारी । – जो स्त्री तनले भन्दा मनले सुन्दर छिन् । – घरका सबै सदस्यालाई उत्तिकै प्रेम, सम्मान, श्रद्धापूर्वक व्यवहार गर्ने । – जो घरमा आएका आगन्तुकलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
– जसले सबैलाई मिठो-मसिनो र स्वस्थ्यकर खाना खुवाउँछिन् । – जसले अर्काको दुख देखेर आफ्नो सामाथ्र्य अनुसार सहयोग गर्ने ठान्छिन् र अर्काले दुखबाट उन्मुक्ति पाउँदा आनन्द अनुभूत गर्छिन्। – जसले प्रत्येक दिन स्नान गरेर सफा एवं स्वच्छ वस्त्र लगाएर घरमा प्रवेश गर्छिन्। – बिहान-साँझ पूजाआजा गर्ने, दीप एवं धूपले घरलाई सुगन्धित बनाउने नारी। – धर्म र नीतिको मार्गमा चल्नका लागि परिवारलाई प्रेरित गर्ने नारी। – पतिव्रत धर्मको पालना गर्ने नारी।
Previous कालिञ्चोक भगवती मातालाई कमेन्टमा ॐ लेख्दै शेयर गर्नुहोस्, निकै शुभ हुनेछ आजको दिन
Next श्रीकृष्ण भगवान र बाँसुरीको सम्बन्ध……